अक्षर हिंड्ने बाटो ...: Oct 10, 2012
देश खोजेको दिन
मध्य रातमा यो सहर सुम्सुम्याइ हिड्नुको मज्जा बेग्लै छ । सहर अहिले मुर्दा शान्तिमा उघिँरहेको छ । केही हामी जस्ता छन् भने पनि तिनीहरु घर फर्किसकेका छन्, हामी हिँडीरहेको यो किनाराबाट । रत्नपार्क दिन भरिको आफ्नो वस्लत मिलाएर सुतिसकेको छ ।
अहिले ठिक मध्य रातीको बाह्र बजेको छ । जून मेरो टाउकोबाट ओरालो खसिरहेको छ । रत्नपार्कको पुल मुनि लोकल कुकुरहरु आफ्नै घर सम्झेर निदाइ रहेकाछन् । म र एक कवि मित्र पुलबाट आँखामा जून तानि रहेछौ । मैले यति शान्त यो सहर कहिल्यै देखेको थिइन । सहरसँग पनि शान्त हुँने समय हुँदोरहेछ ।
पुलको मध्ये भागमा एक पुलिसले मापसे चेक गर्यो । अफसनमा, रु सय तिर्ने कि भोलि बिहान सम्म थुनिने भनेर सोध्यो । मेरा कवि मित्रले सहरको शान्ति बिथोलेर भने “बी आर इन्टरनेश्नल फोटो जर्नालिस्ट । के तिम्रो पनि फोटो खिचेर भोलि छापि दियौँ ? ” त्यस पछि त्यो पुलिसले हामीलाई पढेलेखेको मान्छे भन्यो । मैले सहरको शान्तिलाई ख्याल गर्दै सानो आवजमा भनें हिड्नुहोस् हामी भित्रै गएर गफ गर्छौ । गरौं । उ भित्र जान मनेन । मेरा मित्रले भने “डन्ट टच आवर फ्रिडम, यो शहरमा हाम्रो पनि अधिकार छ दुई चार पाइला हिड्ने, तिमीले हामीसँग के आधारमा रु. सय मग्यौ ? भित्र हिँड म तिम्रो हाकिमसँग कुरा गर्छु ।” पुलिस सडक ल्याम्पोष्ट मुनि उभिएर एक हातले अनुहार छमिरहकोे थियो । सायद सोच्दै थियो होला यो रातमा सय रुपैँयमा पनि नदिने अटेरी कसरी भेटें भनेर वा सम्झदै थियो होलो बोडिङ्ग स्कुलको छोराको फि वा भर्खरै सकिएको श्रीमतीको तिजको दर खर्च वा दशैं पेश्की र मन्सुली चामलको भाउ वा बजेट भाषण र तलबको स्केल, हाकिमको अनुहार र बढुवाको सूची पत्र ।
मैले हिडने बेला भने थ्याङ्गस फर योर डियुटिज ।
दरबार हाइस्कुल ङिच्च दाँत देखाएर रानी पोखरी हेरिरहेकोे थियो । स्कुलको सिधा छानो माथी बाटै ठूलो हवाइजाहाज उडेर गयो सायद आफ्नै विद्यार्थी बोकेर मलेसिया, दुवई कतार वा साहुदी उडिरहेको थियो होला । हवाइजाहाजको आवजले विउँजिएको कुकुर एकपल्ट उभिएर फेरि सुत्यो । यो मध्यरातको हवइजाहाजको आवजसँग यो कुकुर अब्यस्त हुनु पर्छ ।
रात ओरालो खस्ने क्रममा छ । रानी पोखरी समुन्ने घण्टा घरले एक बजाइ सक्यो ।
यो सहरसँग बिचित्रको अनुभव छ । तीन ठिटौले तन्नेरीहरु नेपाली फिल्मको पोष्टर र केही रष्ट्रबादी नारा लेखिएका पहेंला पमप्लेपटहरु जमलका भित्ताहरुमा टाँसी रहेकाछन् । सहर निदाएको बेला यो प्रचारको अर्थ अमुर्त छ । मेरो दिमागमा शंकर लामिछेने आएर घुम्छन साहेद अब्सट्राक प्याज चिन्तन यहि होला । मेरा धेरै कवि मित्रहरु सहरलाई बातै पिच्छे गालि गर्छन र पनि यो शहर छाडेर गाँउ फर्कदैाई गफ हान्नु छ । के बेर बुद्ध शान्ति खोज्दा खोज्दै थाकेर रेष्ट गर्न आइपुगेकाछन् कि । मध्य रातमा कस्ले दे योजना छ । एक फन्को दरबार मार्ग । राज दरबारको ओरिपरि ठमेलको गल्लि, टुँडिखेल र विहान घाम उदाउँदा सहीद रमुख अतिथी भएर ठमेल आएको भेटेको छु । कृष्ण र ठमेलको त पुरानै सम्बन्ध हो उनी रसलिलामा ज्यान फाल्ने भगवान परे आज भेटिन सक्छन् ।
नभन्दै हाम्रै अगाडिबाट चार सुन्दरी च्यापेर एक मान्छे गयो । अनुहारै त देखिन तर हाउभाउ कृष्णको जस्तै थियो ।
यो शहरमा रात रात भार हिड्म्झनु पर्यो शैनिक दिवस र प्यारग्लाइडिङ्गबाट ओर्लदै गरेको शैनिकको अनुहार र सहिद गेटको सालिकहरु त्रसनी गरि पडकाइएको तोपको सलाम ।
वेख्छ, पैगम्बर मोहमद मस्जितबाट उम्केर आइपुग्न के बेर । जेसिसक्राइस्ट धेरै पल्ट क्रिस्मस डेको दिनि प्रमुख अतिथी भएर ठमेल आएको भेटेको छु । कृष्ण र ठमेलको त पुरानै सम्बन्ध हो उनी रसलिलामा ज्यान फाल्ने भगवान परे आज भेटिन सक्छन् ।
यो शहरमा रात रात भार हिड्ने कस्को हिम्मत कि कवि हुन पर्यो कि पागल । मेरा मित्रले भने ।
मेरा कवि मित्रले ठमेलको छातिमा उभिएर सम्झे आफ्नो हातको सुनको बाला घाटिको सिक्री झोलाको क्यमारा र भने सायन जी अलिक असुरक्षित त्म आइपुगेको छ । भिमसेन थापाले गणतन्त्र देख्न पाएनन् । मलाइ उनको पछुतो लाग्यो तर यो भिमसेन स्तम्भले हरेक साल गणतन्त्र दिवसको तमसुकमा किनाराको साँक्षी बसन पाएको छ । भोलि अदालतमा साँक्षी बक्नु छ भिमसेन स्तम्भले गणतन्त्र लफडाको मुद्यामा ।
मेरा कवि मित्र चुपचापछन् सायद उनल
कवि मित्रले अलि शान्त मुडमा भने “सहीद सरहरु हो नमस्कार हामी रात भर देश खोज्दै हिडेका हौँ । ” अनि शहिद मध्य गंगालालले भने “के देश भेट्यो त ? ” कवि मित्रले भने “गंगालाल सर देश भेट्यौँ िजुली बत्तिले बनाएको धरहराको छायाँ झन्डै टुँडिखेलसम्म आइपुगेको छ । भिमसेन थापाले गणतन्त्र देख्न पाएनन् । मलाइ उनको पछुतो लाग्यो तर यो भिमसेन स्तम्भले हरेक साल गणतन्त्र दिवसको तमसुकमा किनाराको साँक्षी बसन पाएको छ । भोलि अदालतमा साँक्षी बक्नु छ भिमसेन स्तम्भले गणतन्त्र लफडाको मुद्यामा ।
मेरा कवि मित्र चुपचापछन् सायद उनले खोजेको शान्ति भेटेछन् क्यार । कुन दिन मेरो देशको सासकले जन्तालाइ भन्ने छ चाहे जस्तो शान्ति कसैले खोजेको भए मध्य रात पछि टुँडी खेलमा उभिनु ।
अब उज्यालो हुने क्रममा रात खसिरहकोेछ, ओरालति रत्नपार्कको आकासे पुलमाथी ड्युटि बस्ने पुलिससँग रहिछ देश । अलिकति जमलका भित्तारुमा, पमप्लेट र पर्चाहरुमा, दरबार हाइस्कुलको छानु माथी, ठमेलको गल्लिमा, अलिकति हजुरको आँखा सामुन्ने टुँडिखेलमा, यो अग्लो भिमसेन स्थबको टुप्पोमा धेरै ठाउँमा देश भेटेर आएको हौँ शहिद सर । ”
चारै जान मुसुक्क हाँसेर भने “देश अब्स्टा«यक छ ।”